Mombasa | Wararka Safarka
Ku dhowaad 500 kiilomitir waxay u jirtaa Nairobi waa jasiiradda Mombasa, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Kenya marka laga reebo caasimadda oo qiyaastii 700.000 oo qof deggan yihiin. Waxaa laga soocaa qaaradda Afrika laba durdur waxaana isku xidha markooda buundooyin fara badan.
Mombasa waxay leedahay deked weyn iyo howlo dalxiis. Tan iyo markii la aasaasay qarnigii XNUMXaad, waxay ahayd magaalo leh shakhsiyad u gaar ah. Waxay neefsaneysaa saameyn Carab, Hindi iyo Yurub oo lagu arki karo dhismaheeda badan ee diinta iyo madaniga ah. Ma rabtaa inaad ogaato Mombasa?
1 Wadada loo maro Old Town
1.1 Dekedda Mombasa
1.2 Macbudyo ku yaal Mombasa
1.2.1 Islaami ah
1.3 Dhismaha bulshada
1.4 Macluumaad la taaban karo oo loogu talagalay safarka Kenya
Wadada loo maro Old Town
Waxaad ka bilaabi kartaa safarka dekedda, halkaasoo ay ku yaalliin naadiyo badan oo naadir ah iyo hoteello. Masaajidada Basheiky Mandhry ee lagu dhisay aasaaskii qarnigii XNUMXaad sidoo kale waa halkan.
Halkaas waxaan uga sii soconeynaa Mbaraki halka uu ku yaalo Mbaraki Pilar, oo ka mid ah astaamaha Mombasa. Waa xabaal uu madax u yahay qabiil hore oo ka kooban tiirar dhagax nuurad ah leh burooyin burooyin leh iyo nuurad dhammeystiran. Waxay ku wareegsan tahay baobab natiijaduna waa mid cajiib ah.
Macbudyo ku yaal Mombasa
Masaajiddada Bohra oo leh minaarad sare, ta Baluchi Jundaan oo leh qotomis dherer ah, kan Ismaili oo leh wejihiisa laba jibbaaran iyo kan xagalka ah ee Bondeni ayaa u muuqda tusaale ahaan qaab dhismeedka Islaamka.
Mombasa sidoo kale waxay leedahay macbadyo Hindu ah oo xiise weyn u leh sida macbudkii midabka hore ee Jain Temple ee ku yaal Langoni Street, Macbadka Sikh ee ku yaal Mewmbe Tayari Street, iyo macbadka aadka u qalaad ee Haile Selassie Swaminaryan oo la dhisay 1955.
Wadada Nkrumah waxaa ku yaal dhisme kale oo matalaya Mombasa: Katooliga Katooliga ee Ruuxa Quduuska ah. Kaniisada Anglican ee Islaamku saameeyay sidoo kale waxay mudan tahay booqasho.
Sawir | Infobae
Ku soo dhex socoshada Magaalada Old waa raaxo. Meel muhiim ah oo lagu booqdo inta lagu guda jiro safarka Mombasa waa Fort Jesus, oo ah qalcad qadiimi ah oo uu dhisay sanadkii 1593 Bortuqiiskii. Waa arrin aad u liidata sida wanaagsan ee loo ilaaliyay ceelka lagu keydiyo biyaha, aasaaska, haraadiga markabka hubaysan ee San Antonio de Tanna, ururinta dhoobada ka soo baxda xeebta iyo Guriga Carbeed ee Cumaan, oo ah guri Ottoman ah qarnigii XNUMX-aad. Tusaale kale oo ah qalcad uu Burtuqiisku dhistay waa Fort St. Joseph.
Dhismayaasha kale ee xiisaha weyn leh ee lagu garto qaabkooda Ingiriisiga ee saameynta weyn ku leh Hindida waa Casa Leven, buundada cusub ee Nyali iyo Khasnada Square. Sidoo kale mudan in la booqdo waa dhismaha Xaraashka Datoo, Buundada Dhagaxa, Hoteelka Castle oo leh barxad wacan oo aad ku hakin karto wadada iyo guriga Dodwell oo leh saqaf qurux badan oo ka soo jeeda Mangalore
Dhinaca kale, maxkamadihii hore waxay u dhaqmaan sidii matxaf rinjiyeysan oo la hagaajiyay. Waxaa jira qaybo runtii xiiso leh waxaadna ku arki kartaa xoogaa saameyn Ingiriis ah dhismaha.
Macluumaad la taaban karo oo loogu talagalay safarka Kenya
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Isbaanishka waxay kugula talineysaa inaad taxaddar badan muujiso markaad u safreyso Kenya iskana ilaaliso meelaha qaarkood sida gobolka Woqooyi-bari, xadka Soomaaliya iyo xaafadaha isku raranta ah ee Nairobi.
Fiisooyinka waxaa looga baahan yahay ajaanibta badankood waana la heli karaa. Habka ugu fudud ee loo isticmaali karo, loo bixin karo loona heli karo isla markiiba waa nidaamka elektaroonigga ah, fiisaha internetka ee dawladda Kenya.
Bangiyada oo dhami waxay ku badashaan lacagta doolarka, euro, iyo lacagta ingiriiska lacagta shilinka Kenya. Waxaa jira ATM-yada magaalooyinka dhexdhexaadka ah, sidaas darteed waxaa lagugula talinayaa inaad sidato kaarka bangiga iyo kaarka deynta iyo lacag caddaan ah.
In kasta oo inta badan lacagaha waaweyn lagu kala beddeli karo magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa, haddana magaalooyinka ka baxsan magaalooyinkan waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo xagga lacagaha ah oo aan ka ahayn doollarka Mareykanka, Yuuroo, iyo lacagta Ingiriiska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Afrika » Mombasa